20 ပိုလန်တွင်လူကြိုက်များသောအိန္ဒိယသဘာဝကျောက်စာ | Flodeal Inc မှ.
လူကြိုက်အများဆုံးအိန္ဒိယကျောက်ရှာမည်, စကငျြကြောကျ, ပိုလန်နှင့်သဲကျောက်လူကြိုက်များ.
ပိုလန်အိန္ဒိယကျောက်များအတွက်ရေပန်းစားစျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်, သဲကျောက် & စကျင်ကျောက်တင်ပို့သူများ. ပိုလနျကုမ်ပဏီမြားသွင်းကုန်အိန္ဒိယသဘာဝကျောက်ခဲပုံမှန်. high-အရည်အသွေးအိန္ဒိယကျောက်များနှင့်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းပိုလန်ရဲ့ပြည်တွင်းစျေးကွက်များအတွက်ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများမှာ. အိန္ဒိယကနေသဘာဝကျောက်ခဲခင်းများအတွက်အသုံးပြုကြသည်, မီးဖိုချောင်ကောင်တာများ, memory နဲ့ပိုလန်အတွက်စီမံကိန်းများအတွက်. သငျသညျပိုလန်ဈေးကွက်ထဲမှာလူကြိုက်များနေသောအိန္ဒိယအနေဖြင့်သဘာဝကျောက်ခဲအောက်ပါရှာတှေ့နိုငျ :
ပိုလန် Market ကလူကြိုက်များသောအိန္ဒိယကျောက်
အိန္ဒိယသည်၎င်း၏အရည်အသွေးမြင့်ကျောက်များအတွက်ကျော်ကြား. အိန္ဒိယကမ္ဘာပေါ်မှာကျောက်၏အကြီးဆုံးတင်ပို့ဖြစ်ပါသည်. ပိုလန်အိန္ဒိယကနေကျောက်၏ကွန်တိန်နာထောင်ပေါင်းများစွာ၏တင်သွင်း. အိန္ဒိယကနေကျောက်ရဲ့အရည်အသွေးအတွက်တတ်နိုင်နှင့်ပရီမီယံဖြစ်ပါသည်. ကျနော်တို့ကအိန္ဒိယကျောက်၏ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့နေကြသည်. ကျနော်တို့တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါအောင်, tiles, ကောင်တာများ, နှင့်အထိမ်းအမှတ်အတွက် အိန္ဒိယကနေကျောက်အမျိုးမျိုး. အိန္ဒိယကျောက်တချို့၏အကျဉ်းချုပ်ကိုမိတ်ဆက်စကားဖြစ်ပါတယ်အောက်ပါ, ပိုလန် Market ကအတွက်ရေပန်းစားနေသော.
Astoria Cream ကျောက်နက်မုန့်နောက်ခံနဲ့ချောကလက်နှင့်မီးခိုးရောင်၏မဲမှောင်သွေးပြန်ကြောနှင့်အတူအကြမ်းခံကျောက်ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါ Astoria Cream ခဲအပူချိန်ကိုတှနျးလှနျအပေါင်းတို့နှင့်ရာသီဥတုဖော်ရွေဖြစ်ပါတယ်နိုင်ပါတယ်.
သငျသညျအရည်အသွေးမြင့်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများနှင့်ကြမ်းခင်းအောင်၌ဤပရီမီယံကျောက်ကိုသုံးနိုင်သည်. ဒါဟာမဆို High-end ခေတ်သစ်မီးဖိုချောင်မှပရီမီယံကြည့်ပေးသည်.
ကိုလိုနီခေတ် Cream လည်းအိန္ဒိယကနေမုန့်အရောင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်, အဆိုပါပိုလန်ဈေးကွက်ထဲမှာလူကြိုက်များထားတဲ့ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါကိုလိုနီ Cream တစ်ခု All-ရာသီဥတုအထောက်အထားကြံ့ခိုင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်.
သငျသညျအဆင်းလှမီးဖိုချောင်ကောင်တာများအောင်အတွက်ကိုလိုနီ Cream ကျောက်ကိုသုံးနိုင်သည်, ကြမ်းခင်းများနှင့်မြို့ရိုးကိုဝတ်. ဒါကပရီမီယံမုန့်အရောင်ကျောက်နှင့်မဆိုခေတ်သစ်မီးဖိုချောင်မှတစ်ဦးပရီမီယံထိပေးသည်.
ကိုလိုနီခေတ်ရွှေကျောက်အညိုရောင်နှင့်မီးခိုးရောင် flecks နှင့်သွေးပြန်ကြောနှင့်အတူတစ်ဦး creamy မီးခိုးရောင်နောက်ခံတပ်ဆင်ထားကြောင်းအိန္ဒိယကနေအကြမ်းခံကျောက်ဖြစ်ပါသည်.
ဤလှပသောရွှေကျောက်မိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပစီမံကိန်းများတွင်သုံးနိုငျ. ဤသည်ပစ္စည်းအချိန်ကြာမြင့်စွာခဲအပူချိန်သည်းခံနိုင်. ဤသည်မှာလည်းမီးဖိုချောင်ထိပ်နှင့်လုပ်ငန်းခွင်ထိပ်အောင်များအတွက်စံပြပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်.
Iberico အိန္ဒိယပလက်တီနမ် White ကကျောက်တဲ့လူကြိုက်များတဲ့အရောင်ရှိသော counterpart ဖြစ်ပါတယ် Gris. Luna ပုလဲအိန္ဒိယကနေဒီအဖြူကျောက်၏အခြားအမည်ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျတန်ဖိုးနည်းအခင်းအောင်၌ဤအကြမ်းခံနှင့်ခိုင်ခံ့သောကျောက်ကိုသုံးနိုင်သည်, မီးဖိုချောင်ကောင်တာများ, မြို့ရိုးကိုဝတ်, နှင့် backsplash အုပ်ကြွပ်. ဒါကတစ် All-ရာသီဥတုကျောက်သည်နှင့်အမျှကောင်းစွာခဲအပူချိန်သည်းခံနိုင်.
အိန္ဒိယက Black ကျောက် (မှောငျမိုကျသော)
The Dark က Black ကျောက်သို့မဟုတ် အကြွင်းမဲ့အာဏာက Black ကျောက် မီးဖိုချောင်ကောင်တာများများအတွက်ရေပန်းစားရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်, ပိုလန်အတွက်ကြမ်းခင်းများနှင့်မြို့ရိုးကိုဝတ်. သငျသညျမီးဖိုချောင်အောင်အဘို့ဤမှောင်မိုက်အနက်ရောင်ကျောက်ကိုသုံးနိုင်သည်, ကြမ်းပြင်, နှင့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ကောင်းစွာ.
ဆင်စွယ်ဘရောင်းချောကလက်သို့မဟုတ်အညိုရောင်အရောင် garnets နှင့်သွေးပြန်ကြောနှင့်အတူမုန့်နှင့်အဝါနုရောင်ရှိသောကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဤသည်ပိုလန်၌အခြားသောထင်ရှားသည်မုန့်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဒီကျောက်များ၏ပုံစံအပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောချောမွေ့ဖြစ်ပါသည်. မီးဖိုချောင်ကောင်တာများနှင့်ဤကျောက်များခင်းပိုလဈေးကွက်တွင်အလွန်အမင်း salable ဖြစ်ပါသည်.
အဆိုပါရောင်စုံအိန္ဒိယကျောက်ပုဖြစ်ပါသည် အနီရောင်ရောင်စုံကျောက်. ဤသည်ကျောက်အလွန်မီးဖိုချောင်နှင့်စျာပနအခမ်းအနားမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာအသုံးပြုသည်. ဤသည်ကျောက်အပေါငျးတို့သတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါကျော်အညိုရောင်နှင့်အနက်ရောင်လှိုင်းအတက်အကျပုံစံနှင့်အတူအနီရောင်အခြေစိုက်စခန်းရှိပါတယ်.
သစ်မှာ Imperial နီတစ်မြောက်ပိုင်းအိန္ဒိယကျောက်ဖြစ်ပါသည်, အရာပိုလန်၌အလွန်ကောင်းသောလက်ခံရှိပါတယ်. ဤသည်ကျောက်ခင်းခြင်းနှင့်အသုဘအထိမ်းအမှတ်များအတွက်ရေပန်းစားရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါအတွက်ရရှိနိုင်, အုပ်ကြွပ်နှင့်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများအရွယ်အစား.
ကက်ရှမီးယားအဖြူရောင်အခင်းများအတွက်ရေပန်းစားရွေးချယ်မှုခဲ့, မြို့ရိုးကိုဝတ်, အချိန်ကြာမြင့်စွာများအတွက်ပိုလန်ဈေးကွက်ထဲမှာ backsplash နှင့်ကောင်တာများ. ဤသည်ကျောက်ပိုလန်အတွက်ကျယ်ပြန့်လက်ခံရှိပါတယ်. tiles, ပြား, နှင့်ကောင်တာများအညီအမျှ၏ကျော်ကြားများမှာ ကက်ရှမီးယား White ကကျောက်.
Orion အပြာရောင် Vizag အပြာရောင်ကျောက်တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာနာမတော်သည်. ဤသည်ကျောက်ကျယ်ပြန့်အသုဘအထိမ်းအမှတနှင့်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများအောင်အသုံးပြုသည်. ဤသည်ကျောက်အကြမ်းခံသည်နှင့်တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်နှင့်ခဲအပူချိန်လည်းညှိုးနွမ်းပါဘူး.
မြစ် White ကအိန္ဒိယကနေပရီမီယံရဲ့အရည်အသွေး White ကကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဤသည်ကျောက်အလွန်ကောင်းစွာကြော့မီးဖိုချောင်ထိပ်နှင့်ပရီမီယံအခင်းအောင်များအတွက်ပိုလန်ဈေးကွက်ထဲမှာလက်ခံသည်. ဤသည်ကိုလည်း backsplash အုပ်ကြွပ်နှင့်မြို့ရိုးကိုဝတ်အောင်အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်. သငျသညျကိုအကြှနျုပျတို့မှပြားနှင့်အုပ်ကြွပ်အတွက်မဝယ်နိုင်ကျောက်.
ကြယ်ပွင့်က Galaxy ကျောက်သို့မဟုတ်အနက်ရောင်က Galaxy ကျောက်အိန္ဒိယကနေပရီမီယံကျောက်ဖြစ်ပါသည်, ပိုလန်အတွက်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများနှင့်ကြမ်းခင်းများအတွက်လူကြိုက်များပစ္စည်းအရာဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါပစ္စည်းကိုငွေနှင့်ရွှေ flecks နဲ့မှောင်မိုက်တဲ့အနက်ရောင်နောက်ခံရှိပါတယ်.
Surf အစိမ်းရောင်အိန္ဒိယကနေအလင်းအစိမ်းရောင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဤသည်ကျောက်ပုံစံလည်းမှောင်မိုက်သွန်းလှိုင်းတံပိုးတွေနဲ့အလွန်အလင်းအဝါရောင်အစိမ်းရောင်နောက်ခံရှိပါတယ်. ဒါကမီးဖိုချောင်ကောင်တာများနှင့်အခင်းအဘို့အလွန်ကောင်းလှ၏.
Tan ကဘရောင်းကကျောက်အိန္ဒိယကနေအကျော်ကြားဆုံးဘရောင်းကျောက်တစျဦးဖွစျသညျ. ဒီကျောက်၏နောက်ခံပုံစံအတွက်တစ်ပိုင်းအရောင်ကျောက်သလင်းနှင့်အတူမှောင်မိုက်အညိုရောင်ဖြစ်ပါသည်. ဒါကမီးဖိုချောင်ထိပ်နှင့်ပရီမီယံရဲ့အရည်အသွေးအခင်းအောင်အသုံးပြုသည်.
Viscount အဖြူသို့မဟုတ် Viscon အဖြူလည်းပိုလန်နိုင်ငံ Viskont White ကကျောက်အဖြစ်စာလုံးပေါင်းဖြစ်ပါတယ်. ဤသည်ကျောက်ပိုလန်အတွက်ပါတဲ့လူသုံးအများဆုံးအဖြူရောင်ကိုအရောင်ကျောက်တစျဦးဖွစျသညျ. tiles, Viscount အဖြူပြားများနှင့်မီးဖိုချောင်ကောင်တာပိုလန်ဈေးကွက်ထဲမှာတစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောဂုဏ်သတင်းကိုရရှိခဲ့သည်ပါပြီ.
ပိုလန် Market ကလူကြိုက်များသောအိန္ဒိယစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်း
ရုံကျောက်များကဲ့သို့, Indian marbles are alsoapopular choice for flooring, မြို့ရိုးကိုဝတ်, အဆိုပါပိုလန်ဈေးကွက်ထဲမှာတက်လှေကားများအပြင်. The Marbles are used mainly for wall cladding and flooring. သင်တို့မူကားအဖြစ်ကောင်းစွာအိန္ဒိယစကျင်ကျောက်ကနေအရည်အသွေးမြင့်ကောင်တာများဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်. ထို့အပွငျ, Indian Marbles are unique in Color and Pattern, အရာမဆိုလူနေအိမ်သို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်စီမံကိနျး၏ဂုဏ်အသရေကိုပိုကောင်းစေပါတယ်. ကျနော်တို့ပြားအောင်, အုပ်ကြွပ်, အိန္ဒိယစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းအတွက်အရွယ်အစားနှင့်ကောင်တာမှဖြတ်. လူကြိုက်များအိန္ဒိယစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းအကြောင်းကိုအကျဉ်းချုပ်ကိုမိတ်ဆက်စကားအောက်ပါကဲ့သို့ဖြစ်၏:
Verde ဂွာတီမာလာအိန္ဒိယထဲကနေလှပတဲ့အစိမ်းရောင်အရောင်စုံစကျင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဤ အစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက် အလွန်အကြမ်းခံနှင့်ခိုင်ခံ့သောပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ချောကြာ. သငျသညျမီးဖိုချောင်များအတွက် Verde ဂွာတီမာလာစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းကိုသုံးနိုင်သည်, ကြမ်းခင်းများနှင့်မြို့ရိုးကိုဝတ်. ဒါကကြွေပြားများတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်, ကွဲပြားခြားနားသောအသုံးပြုမှုများအတွက်ပြားနှင့်ကောင်တာများအရွယ်အစား.
ဒါကအိန္ဒိယကနေမြွေကျောက်. ဒါကဖြစ်ကောင်းအလှဆုံးအစိမ်းရောင်အရောင်ကျောက်. Bidasar စိမ်းလန်းဒီစကျင်ကျောက်တစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာနာမတော်သည်. ဒါဟာအလင်းနှင့်ကြက်သွေးများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားပျထှေးသောအညိုရောင်အရောင်သွေးပြန်ကြောနှင့်အတူမှောင်မိုက်အစိမ်းရောင်နောက်ခံရှိပါတယ်. သငျသညျအဆင်းလှမီးဖိုချောင်ကောင်တာများအဖြစ်မြို့ရိုးကိုမြင့်တက်စေနိုင်သည်.
ဘရောင်းမုတ်သုံသစ်တောသို့မဟုတ် Bidasar ဘရောင်းစကျင်ကျောက်လည်းမြွေကျောက်များနှင့် Bidasar အစိမ်းရောင်နှင့်ရွှေပစ္စည်းများအနီးတွင်ကျောက်တုံးကြီးများ. ဤသည်စကျင်ကျောက်အများဆုံးရှာသောအခါ-ပြီးနောက်အညိုရောင်အရောင်ကျောက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဒါကတစ်ဦးကြော့နဲ့လှပတဲ့အညိုရောင်စကျင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်.
မိုးသစ်တောရွှေသို့မဟုတ် Bidasar ရွှေကျင်ကျောက်ရွှေအရောင်စကျင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဤသည် Bidasar ဘရောင်းစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းတစ်ပေါ့ပါးသွန်းဖြစ်ပါသည်. ဒီစကျင်ကျောက်၏အဓိကအသုံးပြုမှုမီးဖိုချောင်ထိပ်နှင့်အမှတ်တရဝတ်ဖြစ်ပါသည်. ဤသည်မှာလည်းလှေကားနှင့် backsplash အုပ်ကြွပ်များအတွက်အသုံးဝင်သောစကျင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်.
သဘာဝကျောက်ခဲ၏တင်သွင်းသူအများစုမှာအိန္ဒိယသဲကျောက်နှင့်အတူအိန္ဒိယစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းပေါင်းဘော်ရောနှော. ပစ္စည်းနှစ်မျိုးလုံး၏ပေါင်းစပ်သစ်ကို Importers များအတွက်အလွန်ကောင်းလှ၏. ကျနော်တို့တစ်ခုမှာကွန်တိန်နာအတွင်းအိန္ဒိယသဲကျောက်နှင့်အတူအိန္ဒိယစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်း load နိုင်ပါတယ်.
Indian Sandstones are durable, weatherproof နှင့်မည်သည့်အပူချိန်သည်းခံနိုင်ပါတယ်. ဤကျောက်ခဲတို့ကိုမဆိုကြမ်းတမ်းသောရာသီဥတုသည်းခံနိုင်ပါတယ်. ကျနော်တို့အိန္ဒိယကနေထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပို့ကုန်အောက်ပါသဲကျောက်, ပိုလန်စျေးကွက်မှ. သငျသညျကိုအကြှနျုပျတို့မှအရည်အသွေးမြင့်အိန္ဒိယသဲကျောက်တင်သွင်းနိုင်သည်. ကျနော်တို့လှပသောဂေါ်လီလုံးအချို့နှင့်အတူဤအမှာသဲရောမွှေလို့ရပါတယ်, ပိုလန်ဈေးကွက်ထဲမှာလူကြိုက်များနေသော.
ကျွန်းသစ်တစ်ဦးအဝါရောင်ရွှေရောင်အရောင်သဲကျောက်ဖြစ်ပါသည်, အရာရေကူးကန်နှင့်ပြင်ပတွင်၏အခင်းများတွင်အသုံးပြုသည်. မြို့ရိုးကိုဝတ်ခြင်းနှင့်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦးများအိန္ဒိယကနေဒီသဲကျောက်များအဓိကအသုံးပြုမှုများမှာ. ၏အထူပြား ကျွန်းသစ်သဲကျောက် အသုဘအထိမ်းအမှတ်စေရန်အသုံးပြုကြသည်. ဒါကအိန္ဒိယကနေတစ်ဦးအလွန်အကြမ်းခံခြင်းနှင့် weatherproof သဲကျောက်ဖြစ်ပါသည်.
သက်တန့်သဲကျောက်အိန္ဒိယကနေရောင်စုံစိမ်သဲကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ရုံကျွန်းသစ်နဲ့တူ, ဒါကြောင့်လည်းရေကူးကန်နှင့်ပြင်ပအခင်းများအတွက်ရေပန်းစားရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်. ဤအရာသည်အလွန်ပေါ့ပါးတဲ့ကျောက်ဖြတ်ဖို့လွယ်ကူသည်. the Rainbow လုပ်ကွက်စမ်းရေများအတွက်အလွန်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုများမှာ, အထိမ်းအမှတ, နှင့်အထိမ်းအမှတ်.
အိန္ဒိယသဘာဝကျောက်ခေတ်ကြောင့်အကြမ်းခံနဲ့လှပတဲ့အရည်အသွေးတွေကိုမှပိုလန်ဈေးကွက်ထဲမှာတစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောဂုဏ်သတင်းရရှိထားပြီးပါပြီ. ပိုလန်နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက်သဘာဝကျောက်ခေတ်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များကြောင့်မကြာသေးမီစီးပွားရေးစန်းပွဖို့အောင်မြင်နေကြ. သငျသညျ Flodeal Inc မှာအိန္ဒိယကနေသဘာဝကျောက်ခေတ်အမျိုးအစားအားလုံးကိုဝယ်နိုင်. ကျနော်တို့အိန္ဒိယကနေသဘာဝကျောက်စာ၏ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပို့ကုန်နီးပါးတိုင်းအမျိုးအစား.